जलयात्राका लागि मिसन र भिजन भएको नेतृत्व | .:: Welcome || Paryatannews
Home » विचार » जलयात्राका लागि मिसन र भिजन भएको नेतृत्व
जलयात्राका लागि मिसन र भिजन भएको नेतृत्व
हिमालयन रिभरफन प्रालि ।
नेपालको समृद्धिका लागि जलयात्रा पर्यटन असाध्यै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो माग भनेको सरकारले अनुमति दिएका सबै खोलामा राफ्टिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । पछिल्लो समय जलयात्राको संभावनाका नदीमा जलविद्युतको ड्याम बनाउँदा राफ्टिङलाई चुनौति भइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य विकास निर्माण रोक्नु पर्छ भन्ने होइन, तर विकास निर्माण नरोकिने र जलयत्रा पर्यटन पनि नमासिने गरेर दुबैलाई फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्छ । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले निश्चित नदीको संरक्षण गर्ने र हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा राफ्टिङका सिमिति नदीका सिमित क्षेत्रमा असहजता नहुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
जुन रिभर जलयात्राको निम्ति उपयुक्त छ त्यो ठाउँ जोगाउन सकिएको अवस्थामा भोलीका दिनमा ऊर्जाको विकास पनि हुने र पर्यटन पनि जोगाउन सकिन्छ । अहिले त सरकारकै विभिन्न निकायको फरकफरक पोलिसीले जलयात्रा पर्यटनको व्यापारमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी अवरोध हुन थालेको छ । जसरी सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज जोगाउन सकेको छ त्यसैगरी नेपाली पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनको निम्ति पनि राफ्टिङका उपयुक्त स्थान जोगाउनुपर्छ । नेपालमा हाल १६ हजार नदीनाला छन् । त्यसमध्ये विजुली त जुनबाट निकाले पनि हुन्छ तर राफ्टिङ भने सबैमा हुँदैन । यसर्थ, केही नदी जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य पर्यटकीय क्षेत्र भन्दा पनि जलयात्राका निम्ति भने सिमित साधान स्रोत हुन्छ । त्यसैलाई उपयोग गरेर पर्यटक आकर्षण गर्नुपर्ने पनि बाध्यता छ ।
अर्को विषय नारामा नयाँ नेतृत्वको तयारी पनि भइरहेको छ । अन्य संस्थाको तुलनामा नारा निकै पछाडि परेको छ । आफ्ना गतिविधि प्रभावकारी रुपमा देखाउन सरकारी सहयोग र साथ नभएको कारण अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै कमजोर पनि छ । यसको बलियो छवि बनाउन र दीर्घकालिन मिसन र भिजन भएको व्यक्ति नारामा आउनुपर्छ । नदीको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने प्रोफेसनल व्यक्ति नारामा आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।
जलयात्राका लागि मिसन र भिजन भएको नेतृत्व Reviewed by Shiva Shrestha on Sep 05 . शंकर अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक हिमालयन रिभरफन प्रालि । ...................................................................................... नेपालको समृद्धिका शंकर अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक हिमालयन रिभरफन प्रालि । ...................................................................................... नेपालको समृद्धिका Rating: 0